SLT SPORTS: Tababarayaasha Real Madrid , Barcelona Maxay Ka Yidhaahdeen Ciyaarti Ku Dhexmartay Garoonka Barnbue??. | Somaliland Today
← Danjiraha Maraykanka Ee Qaramada Midoobay Oo Booqanaysa Galbeedka Afrika
Hordhac: Man United v Chelsea Iyo Xaqiiqooyin Ku Saabsan Kulamada Labadan Kooxood →
SLT SPORTS: Tababarayaasha Real Madrid , Barcelona Maxay Ka Yidhaahdeen Ciyaarti Ku Dhexmartay Garoonka Barnbue??.
(SLT-Madrid)-Muxuu Carlo Ancelotti Ka Yidhi Guushii Ay Kooxdiisa Real Madrid Ka Gaadhay Barcelona?.
Tababaraha Real Madrid ee Carlo Ancelotti ayaa tilmaamay in guushii ay kooxdiisu ka gaadhay Barcelona ay ku yimid dadaalka kooxdiisa iyo waliba rabitaanka kooxda Real Madrid.
Gool uu Neymar kooxdiisa Barcelona udhaliyay ayaan waxba ugu filnaan Barcelona kadib markii goolal ka kala yimid Ronaldo, Pepe iyo Benzema ay Real Madrid u suurto galisay inay Santiago Bernabue saaddexda dhibcood kaga reebato Barcelona.
Ancelotti ayaa la waydiiyay wax ugu fiican ee uu kulankan ka helay wuxuuna yidhi: “ waxa ugu fiican ee aanu kulankan ka helnay ayaa ahaa dadaalka kooxda. Madaxa hoos umaanu foorarin markii goolka lanaga dhaliyay”.
“Waxaanu doonaynay inaanu baalaha ka weerarno, qaybtii danbe ee ciyaartana waanu guulaysanay sababtoo ah waxaanu doonaynay inaanu guulaysano”.
Ancelotti ayaa si gaar ah u amaanay Isco oo buuxiyay booskii uu Gareht Bale ka dhaawacnaa wuxuuna yidhi: “Isco wuxuu u shaqeeyay si layaableh laakiin si aanu Barcelona u garaacno qofkastaba shaqo fiican ayaa looga baahnaa”.
Ancelotti ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay: “Guushani waa mid aad u muhiim ah sababtoo ah, kooxda Barcelona aad ayay u xooganayd, waxaananu gaadhnay ujeedadii aanu lahayn taas oo ah inaanu soo yarayno farqiga dhibcaha noo dhexeeya Barcelona, sidaa dareedeed aad ayaanu ufaraxsanahay”.
Luis Enrique: Kama Shalaynayo Inaan Luis Suarez Ciyaarta ku bilaabay
Tababaraha Kooxda Barcelona ee Luis Enrique ayaa cadeeyay inuusan ka shalaynayn inuu Luis Suarez ku bilaabay kulankii Clasico ee dhex maray kooxaha Real Madrid iyo Barcleona.
Inkasta oo uu Luis Suarez garoomada ka maqnaa muddo afar bilood ah ayuu haddana tababare Luis Enrique ku bilaabay line upkiisa uu kala hortaygay kooxda Real Madrid.
Suarez ayaa kubbad fiican u soo dhigay Neymar kaas oo isaguna kooxda Barcelona u dhaliyay goolka kaliya ee ay ciyaarta ka dhalisay. Balse Suarez ayaan sidii looga bartay soo bandhigan ciyaar la odhan karo wuxuu saamayn kulaa kulankan.
Luis Enrique ayaa yidhi: “ Maya kama shalaynayo ama kama qoomamoonayo inaan go’aansaday ku bilawga ciyaarta ee Luis Suarez. Sifiican ayuu Suarez u ciyaaray waliba sidii aan filaayay wuu ka fiicanaa”.
“Qaybtii hore waanu fiicnanayn laakiin waxaanu samaynay qaladaad badan, Madrid na waxay samaysay qaab ciyaareed fiican, wayna u qalmeen inay kulankan guulaystaan, waanu qiimayn doonaa wixii naga qaldamay”.
“Inaad guul daro la kulantaa kubbada cagta ayay ka mid tahay, waa inaanu qaladadkan wax kabaranaa isla markaana aan eegnaa dhamaadka xili ciyaareedka”.
Real Madrid ayaa soo yaraysay farqigii dhibcaha ee udhexeeyay iyada iyo Barcelona waxayna ku soo koobtay hal dhibic oo kaliya.
Difaaca Barcelona ee Gerrard Pique ayaa qirtay inay Real Madrid u qalnatay guushii ay ka gaadhay kooxdiisa Barcelona. Real Madrid ayaa 3:1 kaga badisay Barcelona kulan xiiso badan oo ku dhexmaray Bernabue.
Inkasta oo Neymar kooxdiisa goolka kowaad ugu furay ayay haddana Real Madrid goolkii Neymar kooxda Barcelona ugu sariftay 3:1. Real Madrid ayaana guul muhiim ah ka gaadhay kooxda ay colaada wayni ka dhaxayso ee Barcelona.
Pique Oo Sheegay Inay Real Madrid Uqalantay Guushii Ay Ka Gaadhay Kooxdiisa Barcelona
Pique ayaa ahaa ciyaartoygii kooxdiisa usababay in goolka kowaad lagadhaliyo isagoo ahaa ciyaartogii galay gacanta kubbada ku dhuftay ee sababtay in rekoodhe lagu dhigo kooxdiisa.
Pique ayaa yidhi: “ Ciyaarta si fiican ayaanu ku bilaabanay, waxayna ahayd inaanu 2:0 yeelano qaybtii hore, laakiin dhamaadkii ciyaarta Real Madrid ayaa uqalantay inay guulaysato marka la eego sida ay u ciyaartay”.
Pique oo gacanta ku dhuftay rekoodhihii Ronaldo loo dhigay wuxuuna yidhi: “Ma waxaad iwaydiinaysaan gacantii aan kubbad ku dhuftay? May ahayn mid aan ugu tallo galay”.
Luis Suarez ayaa kulankii sii ugu horeeyay oo rasmi ah u saftay kooxdiisa Barcelona wuxuuna Pique oo arinta Suarez ka hadlay ayaa yidhi: “ Suarez markale ayuu diyaar noqday waxayna ahayd doorasho fiiican inuu kulanka ku bilawdo. Tababaraha ayaa doortay inuu ciyaarta ku bilawdo waxaanan filayaa inuu shaqo fiican qabtay”.